အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ Archives - Page 10 of 28 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခြောက်သွေ့သော အသားအရေနှင့်ဗီတာမင်အေ ဗီတာမင်အေဟာ လူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုများစွာအကျိုးပြုပြီး အရေပြားကိုလဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ဗီတာမင်အေဓါတ် မပြည့်ဝခြင်းဟာ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကိုသာမက အခြားသောအရေပြားပြဿနာများကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေဆိုတာ ဘာလဲ? ဗီတာမင်အေဟာ အဆီတွင်ပျော်ဝင်သော လူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မျက်စိအမြင်အာရုံ၊ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၊မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့် အရေပြားကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ? (၂)မျိုးရှိပါတယ်။…
ညအိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုတာဆက်စပ်နေပါသလား? ”အိပ်ရေးမပျက်စေနဲ့ မင်းရဲ့ မျက်ကွင်းလေးတွေ ညိုပြီးမဲမယ်” FM ကပျံ့လွင့်လာတဲ့ Xboxရဲ့သီချင်း ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ မျက်ကွင်းလေးတွေ တကယ်ကိုပဲညိုမဲတတ်ကြပါသလား? အဖြေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ညိုတတ်ပါတယ်။ မဲတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရသလဲ? မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို လူတိုင်းတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ…
သားသားမီးမီးခြေထောက်ပေါ်က အနာလေးတွေ နုနယ်လှတဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ ခြေထောက်လေးတွေပေါ်မှာ အနာလေးတွေ၊အဖုလေးတွေ၊ယားနာလေးတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာကို ဖေဖေမေမေတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အချို့အနာလေးတွေက တစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားကာ အချို့ကအတော်ကြာကြာကျန်နေတတ်တာကိုလဲ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေမှာအဖြစ်များတဲ့ အနာလေးတွေအကြောင်းထဲက နှင်းခူ(Eczema)အကြောင်းလေးကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူ(Eczema)ဆိုတာ ဘာလဲ နှင်းခူဆိုတာ…
အရေပြားကင်ဆာ ကာကွယ်ဖို့ရာ ကျန်းမာစိုပြေပြီး ရောဂါကင်းဝေးတဲ့ အသားအရည်လေးကို မိန်းကလေးတို့ပိုင်ဆိုင်လိုကြမှာပါ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ အသားအရေလေးတွေလှပပြီး အရေပြားကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတွေကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ် အရင်ဦးဆုံးအရေပြားကင်ဆာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာပြောပြပါမယ် အရေပြားကင်ဆာမှာ ဖြစ်တဲ့ဆဲလ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အဓိက(၃)မျိုးရှိပါတယ် 1)Squamous cell carcinoma(SCC) 2)Basal cell…
ဆောင်းတွင်းနှင့်အသားခြောက်ခြင်း ဆောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါ လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများတော့ အသားခြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာပါ။ အသားအရည်လေးတွေ ခြောက်လာပြီး အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်ရုံမက သိပ်ဆိုးတဲ့အခါအသားတွေနာကျင်ကွဲအက်ပြီး အရေပြားတွေပါကွာလို့ စိတ်ရောလူရောအနှောက့်အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းကျမှ ဘာကြောင့်အသားအရေပိုခြောက်ရသလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းသည် ရာသီဥတုသာအေးနေပြီး လေထုစိုထိုင်းဆ(Humidity level)မှာ လျော့ကျသောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေပါ ခြောက်သွေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။…
Thing to do for Skin Care
အသားအရည် ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းရာမှာ မသိမဖြစ်အချက်ကလေးတွေ မိန်းမကောင်းတို့ရဲ့ အင်္ဂ ါရပ်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ အသားအရေ၏ကောင်းခြင်းကို မတ်မတ်တို့လိုချင်ကြမှာမလွဲပါ၊၊ အသားအရည်ကာင်းခြင်းလို့ဆိုရာမှာ ဖြူနေမှ ဆွတ်နေမှ မဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး စိုစိုပြေပြေ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းသောအသားအရည်လေးသာဖြစ်ပါတယ်၊ဖြူခြင်းညိုခြင်းက အဓိကမကျပါ။ ဒီလိုကျန်းမာစိုပြေပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အရေပြားအလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့်…
Ways to do for your Skin Care
အသားစိုပြေဖို့ နည်းလေး တွေ အကြောင်း သင်သိစေဖို့ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် နုပျိုလှပနေသော အမျိုးသမီးများကိုတွေ့တိုင်း “ဝိုး သူတို့ဘာလို့ဒီလောက်အရွယ်တင်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိလိုပါလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းတော့ ဒီလို နုပျိုရခြင်းဟာ ဆုတောင်းကောင်းခြင်းထက် အချိန်ပေး ပြုစုမှုဟုပြောလျှင် မအံ့ဩလိုက်ပါနဲ့။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါပဲ။ အရေပြားဟာ…
Uneven skin tone (Causes and Treatment)
ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာ လင်းလက်နေသော အသားအရေများပိုင်ဆိုင်စေဖို့ အသားညိုသူတွေက ဖြူချင်ကြတယ်…..ဖြူသူတွေက ညိုချင်ကြတယ်….. အသားမညီသူတွေက အသားအရောင်လေးတပြေးတည်း ညီချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရေ မညီညာခြင်းကလည်း ပြသနာတစ်ရပ်ပင်။ အသားဖြူဖြူ ညိုညို …..အနည်းဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရောင်လေးညီနေရင် ဘာပြောပြောကြည့်လို့ အဆင်ပြေသည်။အသားမညီတဲ့အခါကျ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ …..ဝတ်ရစားရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှ။…